Malunga nathi -Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.
Inkampani yasekwa ngo-1998
Uneminyaka engaphezu kwama-20 yamava emveliso
Inamalungelo awodwa agunyaziswe ngurhulumente angaphezu kwama-20, amalungelo awodwa abenzi bamkelweyo aliqela
Ixabiso lezigidi ezili-100 lonyaka
I-Yixing City Jitai Electronics Co, Ltd.yasekwa ngo-1998. Ubungakanani ngoku abasebenzi ungaphezulu kwe-150 ezibandakanya iingcali ezingaphezu kwama-50. Kule minyaka, siye sazibophelela kuphando lwezenzululwazi kunye nokuveliswa kwempahla yesinyithi yeekhompyuter. Thembela kwitekhnoloji yakho yokuphuhlisa ngamandla iphakheji yoluntu. Sihlola imarike yaphesheya kwaye ifezekisa uphuhliso olude.
Sinobuchwephesha obomeleleyo bokugawula iqela labasebenzi abanamava kunye neenjineli zesayensi ezinamandla okuphucula. Kwaye sinobuchule obuqolileyo bokuyila iphakheji yesinyithi kwaye sixhobise ngezixhobo ezipheleleyo zovavanyo lwemveliso. Sinamalungelo awodwa omenzi wechiza agunyazisiweyo kunye nelungelo elilodwa lobunikazi. Sithathwa njengeshishini lobuchwephesha obuphezulu kurhulumente.
Iimveliso eziphambili zibandakanya iphakheji yesinyithi yeesekethe ezihlanganisiweyo ezihlanganisiweyo, izinto ze-opto-elektroniki, izinto ze-microwave, izixhobo zokucoca ulwelo, izixhobo zenzwa kunye nezixhobo ezinamandla amakhulu.
I-Transistor Outline Package, into (edla ngokubizwa ngokuba yi-TO) isetyenziselwe iidacades ezininzi. Sele sele iyimigangatho yemizi-mveliso, uyilo lokulawula kunye nobukhulu bokulawula iphakheji ye-elektroniki. Iphakheji ye-TO ibandakanya izinto ezimbini: i-Header kunye ne-cap. Intloko yimiqondiso yombane yecandelo lokupakisha. Ngelixa ikepusi iqinisekisa ukuhanjiswa ngempumelelo kweempawu ezibonakalayo. Kubandakanywa i-Optical emitter (enje ngesixhobo se-laser) kunye nesamkeli (esifana nesitshisi).
I-header (ekwabizwa ngokuba yintloko) ibonelela ngesiseko soomatshini se-semiconductor njenge-sembly, i-lasser diode okanye isekethe elula njalo njalo kwizinto ze-elektroniki kunye ne-optic.
Sinamava atyebileyo ekuyileni, siyakwazi ukubonelela ngazo zonke iimveliso eziyilo oluqhelekileyo kunye nobukhulu. Sinesiko KWI-header ngokwemfuno zabathengi. Ukulinganisa iintloko ezihambelana ne-TO caps ukwenza umxholo otywinwe ngokupheleleyo, ukukhusela ukungoneliseki kwimeko ethembekileyo yokuqinisekisa ukuba isebenza ngendlela eqhelekileyo.
Kwisicelo seOptical, kwi-header ye-TO isetyenziselwa isicelo sendabuko, kwaye ikwenze isicelo sokukhupha i-TOSA kunye ne-receiver ROSA yokudlulisa ngaphezulu kokudlulisa igalelo lokuphakama kunye neRay ebomvu yeRay njalo kumasimi.
Ekwenziweni kwentloko. Izinto zentsimbi zithathwa zixhomekeke kwindlela yetekhnoloji ubukhulu becala. Ukucinezelwa kwetywina kwenziwa ngentsimbi ebandayo esongiweyo (enje nge-AISI1010). Ngelixa icandelo lesitywina elingqinelanayo lenziwa ikakhulu yiKovar (ASTM-F15) kunye neAlloy 52 (ASTM-F30).
Zonke izibonelelo zemveliso kwinkampani yethu ziyapasa isiqinisekiso se-ISO9001 kwaye zonke iintloko zethu ze-TO ziyahambelana nomgangatho weROHS.
Sinamalungelo awodwa omenzi wechiza agunyazisiweyo kunye nelungelo elilodwa lobunikazi. Sithathwa njengeshishini lobuchwephesha obuphezulu kurhulumente.
Inkampani inomgca wetekhnoloji yokuvelisa esele ikhulile kunye nezixhobo zovavanyo ezigqibeleleyo.
Umgca wemveliso ye-eletronplate
Umgca wemveliso ye eletronplate-Workshop
Indawo yokuvelisa i-R & D
Indawo yokuvelisa iqokobhe leWelding
Umhlalutyi wenethiwekhi yeVector
Iqela lethu laseJitai lihlala lihambelana kwaye liqhubela phambili "umoya wokwenza izinto ngokunyaniseka, othembekileyo, osebenzayo kunye nokuyila", kwaye sihlonipha "imveliso egqwesileyo, inkonzo egqibeleleyo" ukuzibophelela, siyalamkela ithuba lokusebenza nawe kwikamva eliqaqambileyo.